Call Center ရှိ ဖုန်း နံပါတ်များ
( ခ) ၀၁-၂၃၀၂၂၈၆
( ဂ) ၀၁-၂၃၀၂၂၈၇
( င) ၀၁-၂၃၀၂၂၈၉
နိုင်ငံခြားချေးငွေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ (၃၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ အခြေအနေ
(၁) သီလဝါစက်မှုဇုန်သို့ ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံစီမံကိန်း
(Infrastructure Development Project in Thilawa Area Phase I) (MY-P3)
(၁) ချေးငွေအမှတ် - MY-P3
(၂) LA လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ - (၇-၆-၂၀၁၃)
(၃) ချေးငွေအသက်ဝင်သည့်နေ့ - (၂၀-၈-၂၀၁၃)
(၄) ချေးငွေပမာဏ - ဂျပန်ယန်း ၁၀, ၅၆၉ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၆.၃၆၃) သန်း
(၅) အတိုးနှုန်း - ၀. ၀၁%
(၆) ဆိုင်းငံ့ကာလ - (၁၀) နှစ်
(၇) ပြန်ဆပ်ကာလ - (၃၀) နှစ်
(၈) စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၇
(၉) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း - ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Package-1ဖြစ်သော၃၃ကေဗွီသန်လျင်-သီလဝါဓာတ်အားလိုင်း နှင့် Switch Bay (၂)ခု တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
(က) ထုတ်ပြီး - ဂျပန်ယန်း ၃၆၀,၄၆၁,၀၃၄.၀၀
(က) အရင်းဆပ်ပြီး - မရှိ
(ခ) အတိုးဆပ်ပြီးပမာဏ - ဂျပန်ယန်း ၈၃,၅၉၇.၀၀
(၁၂) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - Consultant ဖြစ်သော Nippon Koei မှ Technical နှင့် Financial Proposal များအားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ရွေးချယ်တင်ပြလာသည့် Barons Machinery & Engineering Co.,Ltd. (BME) အား ဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သဖြင့် (၂၉-၁၀-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် လုပ် ငန်းအပ်နှံစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများ အားလုံး(၁၃-၃-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၂) ရန်ကုန်မြို့တွင် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးစီမံကိန်းအဆင့်(၁)
(Power Distribution Improvement Project in Yangon - Phase I)(MY-P10)
(၁) ချေးငွေအမှတ် - MY-P10
(၂) MOD လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ - (၂၉- ၉ -၂၀၁၄)
(၃) LA လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ - (၃၀- ၆ -၂၀၁၅)
(၄) ချေးငွေအသက်ဝင်သည့်နေ့ - (၂၂-၁၀-၂၀၁၅)
(၅) ချေးငွေပမာဏ - ဂျပန်ယန်း ၆,၁၀၅ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀.၀၃) သန်း
(၆) အတိုးနှုန်း - ၀.၀၁%
(၇) ဆိုင်းငံ့ကာလ - (၁၀) နှစ်
(၈) ပြန်ဆပ်ကာလ - (၃၀) နှစ်
(၉) စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၉
(၁၀) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း - Yangon Distribution Improvement အတွက်
(က) ရန်ကင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ဒဂုံ၊ ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်များတွင် ၆၆ ကေဗွီ နှင့် ၃၃ ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံများနှင့်ဆက်စပ်ဓာတ်အားလိုင်းများတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
(Pac 1: Installation of 66 kV substations)
(ခ) ဗဟန်း၊ ဒဂုံ၊ တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်များတွင် Multi Transformer Systemတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း(Pac2:Installationof multi-transformer system)
(ဂ) ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်း၊ လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင်၊ အလုံ၊ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ တာမွေ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်များတွင် ၃၃ ကေဗွီ၊ ၁၁ ကေဗွီ နှင့် ၀.၄ ကေဗွီ ACSR, HDBC ဓာတ်အားလိုင်းများကို Spacer Cable System, Insulated Cable များဖြင့် လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေး Services ကြိုးများ ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ၃၃ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံ များတွင် 33 kV Auto-sectionalisers များ တပ်ဆင်ခြင်း (Pac 3: Replacement of Distribution Lines, including time-sequential auto- sectionalizer)
(ဃ) စက်ယန္တရားများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း (Pac 4: Installation of Utility Vehicles)
Pole Erection Machine (၂) စီး
Compact Hydraulic Excavator (၁) စီး
Truck Mount Aerial Work Platforms (၁) စီး
(က) ထုတ်ပြီး - YESC အနေဖြင့် ချေးငွေထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းမရှိသေးပါ။
(၁၂) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - Consultant Selection ရွေးချယ်နိုင်ရန် Request for Proposal (RFP)၊ Bidding Document ကို ပြုစုပြီး ဖြစ်ပါ၍ (၁၅-၁၀-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် JICA သို့ ပေးပို့ခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
- RFP အတွက် JICA မှ Concurrence ကို (၂၀-၁၂-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့သဖြင့် Consultant Selection ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် Letter of Invitation (LOI) ကို (၁၈-၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် Short Lists ပါ ကုမ္ပဏီများသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
- Consultant Selection အတွက် အဆိုပြုကုမ္ပဏီများ၏ Technical Proposal အား (၃-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဖွင့် ဖောက်ခဲ့ပြီး Evaluation လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် ပြီး Technical Evaluation Report ကို JICA သို့ (၂-၈-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ခဲ့ရာ JICA မှ Concurrence ကို (၁၁-၈-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ Financial Proposal အား (၅-၉-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဖွင့် ဖောက်ခဲ့ပြီး Combined Evaluation Report (Technical + Financial)ကို JICA သို့ (၁၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ခဲ့ရာ JICA မှ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း Concurrence ကို (၂၃-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Combined Evaluation Report အပေါ် (၂၃-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာန၊ တင်ဒါစိစစ်အတည်ပြုရေး ကော်မတီမှ 1st Rank ဖြစ်သော ဂျပန်နိုင်ငံ JERA JV အဖွဲ့ကို Consultant အဖြစ် ရွေးချယ်ရန် အတည်ပြုပြီးဖြစ် ပါသည်။ JERA JV အဖွဲ့နှင့် Contract Negotiation ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
- Package-3 (Replacement of Distribution Line) လုပ်ငန်းအတွက် ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ရန် Bidding Document များကို JICA မှ ခန့်အပ်ထားသည့် Expert များနှင့် ပူးပေါင်းပြုစုလျက်ရှိပါသည်။ - Lot - 1 , 35 kV and 15 kV Spaced Aerial Cable Systems and Accessories များ ဝယ်ယူရန်အတွက် JICA မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း Concurrence ကို (၉-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၅-၇-၂၀၁၇) ရက် နေ့တွင် Local Competitive Bidding စနစ် (မြန်မာ ကျပ်ငွေ)ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့၍ (၂၄-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် ခဲ့ပြီး Bid Evaluation ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- Lot - 2, 33kV, 11kV and 6.6kV Automatic Switching Capacitor Banks များ ဝယ်ယူရန်အတွက် JICA မှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း Concurrence ကို (၉-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၅-၇-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင်Local Competitive Bidding စနစ် (မြန်မာ ကျပ်ငွေ)ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့၍ (၁၇-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် ခဲ့ပြီး Bid Evaluation ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- Lot - 3, 400V Aerial Bundle Cable Systems and Accessories များ ဝယ်ယူရန်အတွက် JICA မှ ကန့်ကွက် ရန်မရှိကြောင်း Concurrence ကို (၇-၇-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၉-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် Local Competitive Bidding စနစ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့၍ (၁၉-၉-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခဲ့ ပြီး Bid Evaluation ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- Lot - 4, Aerial Service Wire and Accessories များ ဝယ်ယူရန်အတွက် (၂၉-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် JICA သို့ Concurrence တောင်းခံခဲ့ရာ JICA မှ ကန့်ကွက် ရန်မရှိကြောင်း Concurrence ကို (၁၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက် နေ့ တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၂၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် Local Competitive Bidding စနစ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့၍ (၅-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် မည် ဖြစ်ပါသည်။
- Lot - 5, Time Sequential Auto Sectionalizer များ ဝယ်ယူရန်အတွက် (၃၁-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် JICA သို့ Concurrence တောင်းခံခဲ့ရာ JICA မှ ကန့်ကွက် ရန်မရှိကြောင်း Concurrence ကို (၈-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၂၀-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် Local Competitive Bidding စနစ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့၍ (၃-၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- Lot - 6, Automatic Circuit Recloser များ ဝယ်ယူ ရန်အတွက် Bidding Document ပြုစုလျက်ရှိပါသည်။
(ခ) အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ချေးငွေများ (ADB Loan)
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှုတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (Power Distribution Improvement Project)
(၁) ချေးငွေအမှတ် - 3084-MYA (SF)
(၂) LA လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ - (၂၈- ၁-၂၀၁၄)
(၃) ချေးငွေအသက်ဝင်သည့်နေ့ - (၃၁-၃-၂၀၁၄)
(၄) ချေးငွေပမာဏ - SDR 38.879 သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀)
ဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်း - ၁%
ပြန်ဆပ်ကာလအတွင်း - ၁.၅ %
(၆) ဆိုင်းငံ့ကာလ - (၈) နှစ်
(၇) ပြန်ဆပ်ကာလ - (၂၄) နှစ်
(၈) စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၈
(၉) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း - ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း
(က) ထုတ်ပြီး - SDR ၂၆,၅၉၁,၁၀၈.၇၅
(YESC နှင့် ESE (၂) ဌာနပေါင်း ထုတ်ယူငွေ)
(ခ) အတိုးဆပ်ပြီးပမာဏ - SDR ၂၁၄,၇၇၄.၅၈ (US$ ၂၉၅,၅၀၃.၀၇) (YESC နှင့် ESE (၂) ဌာနပေါင်း ပေးဆပ်ငွေ)
ရမည့်နေ့ - (၁ - ၁၂ -၂၀၄၅)
အခြေအနေ - AF-Mercados-Energy Markets International S.A အား Project Implementation Consultant (PIC) အဖြစ်ငှားရမ်းခဲ့ပြီး (၁၈-၁၂-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်း အပ်နှံစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါ သည်။
- Package-1 အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Supplier ဖြစ်သူ LS VINA Cable & System Joint Stock Company နှင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို (၃၁-၈-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ Package-2 အတွက် တင်ဒါ အောင်မြင်သော Supplier ဖြစ်သူ Union Resources & Engineering Co., Ltd. နှင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို (၃၀-၉-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း၊ Package-3 အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော Supplier ဖြစ်သူ Soe Electric & Machinery Co., Ltd.နှင့် (၂၂-၁၀-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း ၊ Package -4အတွက် တင်ဒါ အောင်မြင်သော Supplier ဖြစ်သူ Fedders Lloyd Corporation Limited နှင့် (၃၁-၄-၂၀၁၆) ရက်နေ့ တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ ပါသည်။
- Package-6 (Substation Equipments) များ ဝယ်ယူရန် အတွက် (၁၁-၈-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူ၍ (၁၀-၁၀-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သော Xian Electric Engineering Co., Ltd သို့ (၁၃-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် Notification of Award ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို (၁၇-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။
- Package-5 (Cables and Conductors) များ ထပ်မံ ဝယ်ယူရန်အတွက် (၁၈-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ် ယူခဲ့ပြီး (၃၁-၅-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သော LS VINA Cable & System Joint Stock Company သို့ (၂၇-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် Notification of Award ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဝယ်ယူ သော Package-1၊ Package-2၊ Package-3၊ Package-4 စာချုပ်များပါ ပစ္စည်းများအားလုံး ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၆၆/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ၊ ၃၀ အမ်ဗွီအေ တက္ကသိုလ် ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းတွင် မြို့ပြလုပ်ငန်းများ နှင့် လျှပ်စစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (၁၀၀%)ဆောင်ရွက် ပြီး စီးပြီဖြစ်၍ (၂၉-၁၁-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ် ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
- ၃၃/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ၊ ၁၀ အမ်ဗွီအေ ၁၂မိုင်(မင်္ဂလာဒုံ) ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းတွင် မြို့ပြလုပ်ငန်းများနှင့် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ (၂၇-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ် ထားပြီးဖြစ် ပါသည်။
- ၃၃/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ၊ ၁၀ အမ်ဗွီအေ အလယ်ပါရမီ ဓာတ်အား ခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းတွင် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ (၅-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ထားပြီး ဖြစ် ပါသည်။
- ၃၃/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ၊ ၁၀ အမ်ဗွီအေ ကျန်စစ်သားဓာတ်အား ခွဲရုံတည်ဆောက်ခြင်းတွင် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ (၄-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
- ၃၃/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ၊ ၁၀ အမ်ဗွီအေ မီးခွက်စျေးဓာတ်အား ခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်းတွင် မြို့ပြလုပ်ငန်းများနှင့် လျှပ်စစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ(၁၀၀%) ဆောင်ရွက် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်၍ (၁၆-၆-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ဓာတ်အား ပို့လွှတ် ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၆၆/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ (၁x ၃၀)အမ်ဗွီအေ စိန်ပန်းမြိုင် GIS ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအားလုံး (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ (၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- ၆၆/၁၁-၆.၆ ကေဗွီ (၁x ၃၀) အမ်ဗွီအေ၊ AIS တောင်ကမ္ဘာ အေးဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအားလုံး (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ (၁၃-၁၀-၂၀၁၇)ရက်နေ့ တွင် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ - ၁၁-၆.၆/၀.၄ ကေဗွီ ၂၀၀ ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ(၄၇)လုံး ကို အောက်ပါမြို့နယ်များတွင် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါအရေအတွက် များ အတိုင်း တပ်ဆင်၍ ဓာတ်အားပို့လွှတ်သုံးစွဲလျက် ရှိပါသည်။
ကမာရွတ် မြို့နယ် (၅ လုံး)
မရမ်းကုန်း မြို့နယ် (၁၀ လုံး)
မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် (၅ လုံး)
အင်းစိန် မြို့နယ် (၁၅ လုံး)
လှိုင်သာယာ မြို့နယ် (၁ လုံး)
မြောက်ဒဂုံ မြို့နယ် (၅ လုံး)
တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် (၂ လုံး)
ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် (၂ လုံး)
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ် (၁ လုံး)
ဒလ မြို့နယ် (၁ လုံး)
(ဂ) ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ (World Bank)
အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း (National Electrification Project - NEP)
(၁) ချေးငွေအမှတ် - 5727-MM
(၂) LA လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့ - (၃- ၁၁-၂၀၁၅)
(၃) ချေးငွေအသက်ဝင်သည့်နေ့ - (၉-၁၂-၂၀၁၅)
(၄) ချေးငွေပမာဏ - SDR ၂၈၆.၉၀ သန်း
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀)
(က) Commitment Charge - ၀.၅%
(ခ) Service Charge - ၀.၇၅%
(၆) ဆိုင်းငံ့ကာလ - (၆) နှစ်
(၇) ပြန်ဆပ်ကာလ - (၃၂) နှစ်
(၈) စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၅ မှ ၂၀၂၁
(၉) စီမံကိန်းလုပ်ငန်း - မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာနတို့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း
(က) ထုတ်ပြီး - ၁၈၃,၀၄၀.၄၇ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
(YESC၊ ESE နှင့် MESC (၃) ဌာနပေါင်း ထုတ်ယူငွေ)
(ခ) အတိုးဆပ်ပြီးပမာဏ - မရှိ
ရမည့်နေ့ - (၁ - ၈ -၂၀၅၃)
(၁၂) ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ - လုပ်ငန်းများစတင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ Consultant များ ငှားရမ်းရရှိရေး၊ Bidding Document များပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူ ခြင်း စသည်တို့ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။
- Distribution Transformer များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၁၄-၁၁-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၆-၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့် ဖောက်ခဲ့ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် Joint Venture of M/s Hitachi Soe Electric and Machinery Co., Ltd (Myanmar) and Hitachi Industrial Equipment System Co., Ltd (Japan) သို့ Letter of Acceptance ကို (၄-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပေး ပြီး၊ (၂၃-၁၁-၂၀၁၇) ရက် နေ့တွင် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆို ခဲ့ပါသည်။
- Concrete Poles များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၅-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၁၉-၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခဲ့ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် Mate Swe Taw Concrete Pole, Construction & Engineering Co., Ltd သို့ Letter of Acceptance ကို (၁၉-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပေးပြီး၊ (၂၃-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆို ခဲ့ပါသည်။
- Steel Poles များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၆-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၂၁-၄-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် Shanghai Electric Power Transmission and Distribution Engineering Co.,Ltd (China) သို့ Letter of Acceptance ကို (၄-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပေးပြီး၊ (၂၃-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ ပါသည်။
- ACSR Conductor များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၁၁-၅-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၁၁-၇-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ ဖွင့်ဖောက်ခဲ့၍ Bid Evaluation လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
- Insulators and Related Fittings များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၈-၈-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၂၂-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် ခဲ့၍ Bid Evaluation လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- Steel Parts and Accessories များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၁-၉-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပြီး (၂၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက် ခဲ့၍ Bid Evaluation လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- Surge Arrester, Fuse, Transformer Accessories, Medium Voltage Cable & Low Voltage Cable (Accessories) များအတွက် International Competitive Bidding ကို (၂၃-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါ ခေါ်ယူ ခဲ့ပြီး (၁၂-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည် ဖြစ် ပါသည်။
- Consultant ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Mr. S. S. Rao အား Individual Procurement Consultant အဖြစ် ငှားရမ်းခဲ့ပြီး (၁၄-၃-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံ စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက် ရှိ ပါသည်။
- Project Management Implementation Support အတွက် Consultant Firm ခေါ်ယူနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါ သည်။